Ivenkile entsha yeApple eVienna, malunga nokugqiba imisebenzi | IPhone iindaba
Ivenkile entsha yeApple eVienna, malunga nokugqiba imisebenzi
Ukwanda kwamazwe aphesheya kwe-Apple ngokusebenzisa iivenkile zayo, ezaziwa njengeVenkile yeApple, akukho zicwangciso zokuyeka, ubuncinci kwixesha elifutshane. KuDisemba olandelayo 30, I-Apple iya kuvula iVenkile ye-Apple engama-500 eMzantsi Korea, kufutshane kakhulu nekomkhulu le-Samsung eKorea.
Kodwa ayisiyiyo kuphela iVenkile yeApple eza kuvula iingcango zayo kungekudala, kuba njengoko besikwazisile ngaphambili, iApple ijolise kwimizamo yayo kwiVenkile yeApple eAustria, ngakumbi eVienna, kwenye yezona ndawo zixakekileyo kwisixeko sonke. . Ngokutsho kweendaba zamva nje ezifikelela kuthi, imisebenzi sele iza kugqitywa.
Iindaba zokuqala malunga nale Venkile iApple e-Austria zapapashwa ngo-Agasti wonyaka ophelileyo, nangona kwasekuqaleni, imisebenzi yayisele iqalile kwaye ngokungafaniyo neminye imisebenzi, kubonakala ngathi abafana baseCupertino bakhawulezile ukugqiba imisebenzi, njengoko sinokubona kumfanekiso ophambili kweli nqaku, apho zonke iipaneli ezihlala zigubungela uhlengahlengiso lwazo zonke iiVenkile zeApple sele zisusiwe. Ubungakanani bocingo olungqonge amaziko ngexesha lomsebenzi wokubuyisela kwimeko yesiqhelo nawo ancitshisiwe.
Ivenkile entsha yeApple ise Kärntnerstrasse, yenye yezona ndawo zixakekileyo kurhwebo esixekweni kwaye ikwindawo ingqongwe linani elikhulu leevenkile. Ngaphambi kokulungiswa kwakhona kwezi zibonelelo, abemi baseVienna banokuzifumana bekwiivenkile zeempahla zeshishini i-Esprit. Le venkile intsha yeApple iya kuba yeyokuqala ukuvulwa eOstriya, ilizwe kude kube namhla lalingenayo iVenkile yalo yeApple, kunye neCzech Republic, iHungary, iPoland, iPortugal neNorway ukubala imizekelo embalwa, kuba kamva sikhalaza ngabambalwa esinabo eSpain naseMexico.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ivenkile entsha yeApple eVienna, malunga nokugqiba imisebenzi
Inkqubo yengxoxo yeAudio ye-Xbox iza kwi-iOS kungekudala
Khuphela kwaye umamele zonke ii-podcast kwi-Apple Watch yakho kunye nesi sicelo